Wax Ka Ogoow 10 Xidig Oo Ku Fashilmeen Kooxda Manchester United... - Wararka Maanta
Home/Warka Ciyaaraha/Wax ka ogoow 10 xidig oo ku fashilmeen kooxda manchester united…
Wax ka ogoow 10 xidig oo ku fashilmeen kooxda manchester united…
Sida ay sheegayaan wararka, saxiixa 40 milyan ginni ee xagaaga ayaa doonaya inuu ka baxo Old Trafford ka dib markii uu ku guul darreystay inuu boos ka helo kooxda koowaad ololahan.
23-jirkan ayaa kaliya sameeyay labo Premier League tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Red Devils, taasoo walaac weyn ka muujisay qadka dhexe.
Haddii Van de Beek uu ka tagayo United dhamaadka xilli ciyaareedka, wuxuu matali lahaa mid ka mid ah saxiixyadii ugu xumaa abid ee kooxda.
Qoraalkaasna, Sportsmail waxay soo bandhigtay liis ka kooban 10 xidig ee ugu xumaa intii lagu jiray xilligii Premier League.
10. Memphis Depay (£ 25m)
George Best, Bryan Robson, David Beckham iyo Cristiano Ronaldo. Qaar ka mid ah magacyada muuqaalka leh ayaa xirtay maaliyada kooxda ee No 7 waxaana la rajeynayay in Memphis Depay uu kabaha la gashto. Xaqiiqdii, kabahaasi aad ayey ugu weynaadeen xidiga xulka Holland.
Ka dib bilow wanaagsan, oo u arkay inuu si fiican ugu xiran yahay Luke Shaw dhanka bidix ee United, qaab ciyaareedkii Depay wuxuu bilaabay inuu ku hoos ciyaaro Louis van Gaal.
Waxa uu ku maqnaa qeybtii hore ee ciyaarta 3-0 ee ay la ciyaareen Arsenal 4-tii Oktoobar, 2015 waxaana uu raacay qaab ciyaareed aan qarsoodi aheyn labo bilood ka dib kulankii Stoke City. Intii lagu jiray guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Boxing Day, garabka ayaa qalad ku lahaa furitaanka Potters markii madaxiisa xun uu u ogolaaday Glen Johnson inuu caawiyo Bojan Krkic 19 daqiiqo ka dib.
Bandhigiisii ugu fiicnaa ayaa yimid xilli ciyaareedkii dambe oo uu ka hor yimid kooxda deenishka ee Midtjylland ee Europa League laakiin dadaalladaas ayaa ahaa kuwo aad u dheereeya intii uu ku guda jiray xirfadiisa Old Trafford. Bidix kooxda ka dib 18 bilood oo Janaayo 2017 ah si uu ugu biiro Lyon waxaana dib loogu soo nooleeyay France.
9. Bastian Schweinsteiger (£ 6m)
Ku guuleystaha Koobka Adduunka ee Jarmalka iyo doorka ugu weyn ee kooxda Bayern Munich, waxaa la rajeynayay in khibradda Bastian Schweinsteiger ay United ku soo celin doonto sharaftii hore.
Waxaa saxeexay Van Gaal, labadooduba waxay ka wada shaqeeyeen Bayern waxaana jiray aaminaad ah inay ku badin karaan guushooda Bavaria ilaa Manchester.
Kooxda Ac Milan Oo Diyaar U Ah Qaadashada Andrea Belotti.
Ma ahayn inay ahaato. Waxa uu soo muuqday 31 jeer ololihiisii ugu horeysay laakiin nasiibkiisa ayaa isbedelay markii Van Gaal shaqada laga ceyriyay waxaana bedelay Jose Mourinho. Sida Depay oo kale, tababaraha Boortaqiiska ma uusan jeclaan saxiixan uu sameeyay kii ka horreeyay.
Waxaa loo sheegay inuu tababar la qaato kooxda ka hooseysa 23-sano ka hor xilli ciyaareedkii 2016-17 waxaana uu soo muuqday kaliya afar jeer ololahaas ka hor inta aan laga sii deyn qandaraaskiisa bishii Maarso 2017 si uu ugu biiro kooxda MLS ee Chicago Fire.
8. Eric Djemba-Djemba (£ 3.5m)
Si xun ayay laba jeer u magacaabeen? Had iyo jeer waa lagu jees jeesay mid ka mid ah saxiixyadii ugu xumaa ee Sir Alex Ferguson, xidiga reer Cameroon ayaa ku soo biiray intii lagu jiray daaqadda xagaaga 2003 – isla waqtigaas uu Ronaldo sameeyay.
Djemba-Djemba ayaa loo arkayay inuu yahay dhaxalka mudada dheer Roy Keane qadka dhexe laakiin kabtanka halyeeyga ah ayaa sii dheeraaday intii loo maleynayay inuu bedelayo.
Laba sano ayuu ku qaatay Old Trafford ka hor inta uusan u dhaqaaqin Aston Villa. Ka dib markii uu ka soo tagay kooxda Midlands 2007dii shaqadiisa reer guuraaga ah wuxuu u qaatay sida Qatar, Israel iyo India.
Sida laga soo xigtay The Sun, 39 jirka ayaa weli ciyaarayay kubada cagta ilaa sanadkii hore – isaga oo isku soo sharaxaya kooxda heerka shanaad ee Switzerland kooxda ka ciyaarta horyaalka ee Vallorbe-Ballaigues.
7. Kleberson (£ 6.5m)
Mid kale oo ku soo biiray xagaagii 2003, Kleberson shaqadiisa aad ayuu u maray Djemba-Djemba, halkii uu ka ahaan lahaa Ronaldo.
Haddii uu jiray ballanqaad Djemba-Djemba, markaa waxaa jiray wax intaas ka badan oo uu la galay Kleberson – kaasoo door muhiim ah ka ciyaaray Brazil oo ku guuleysatay Koobkii Adduunka sannad ka hor.
Xiddiga qadka dhexe ayaa soo jiitay koox ka dhisan Yurub oo uu soo bandhigay intii uu socday tartankaas laakiin United ayaa qof walba ku garaacday saxiixiisa. Waxay u badan tahay inay jeclaan lahaayeen inaysan rabin.
Kaliya 20 kulan ayuu u saftay Red Devils ka hor inta aan laga iibin Besiktas.
6. Radamel Falcao (£ 6m, amaah)
Khamaar aan bixin. Magaca Radamel Falcao ee waqtigaas wuxuu ahaa mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka ee ku fiicnaa Porto, Atletico Madrid iyo Monaco.
Si kastaba ha noqotee, intii lagu jiray xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee dabayaaqadii (2013-14) wuxuu soo gaadhay dhaawac xagga sare ah bishii Janaayo, taas oo ka reebtay Koobkii Adduunka ee xagaaga.
Deyntiisii xilli ciyaareedkii hore ee United maalintii ugu dambeysay (Sebtember 2, 2014) wuxuu arkay inay bixiyaan dhammaan mushaharkiisa 265,000-todobaad.
Waxay sidoo kale heleen ikhtiyaar ah inay ku iibsadaan £ 43.5m dhamaadka amaahda, laakiin qodobkaas lama kulmin markii uu ku dhibtooday England.
Waxa uu dhaliyay kaliya afar gool 29 kulan oo uu u saftay kooxda waxaana uu u muuqday mid hoos u dhac ku yimid naftiisa hore.
5. Juan Sebastian Veron (£ 28.1m)
Ninka loo maleynayay inuu ku hagi lahaa Manchester United dib ugu soo laabashada awooda Yurub, Juan Sebastian Veron iyo Paul Scholes iyo Keane qadka dhexe ayaa rajo weyn ka muujiyay qof walba oo ku xiran kooxda.
Xiddiga reer Argentine ayaa ka yimid kooxda reer Talyaani ee Lazio isagoo ku dhaqaaqay 28.1 milyan ginni – lacagtaas oo u dhiganta afar jeer suuqa haatan.
Waxa uu ku dhuftay dhulka isagoo leh afar gool sideedii kulan ee ugu horeysay waxaana uu xitaa ku guuleystay abaalmarinta Premier League ee bisha Sebtember.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu si dhakhso leh u bilaabay inuu la dagaallamo dalabaadka kubada cagta Ingariiska wuxuuna noqday ciyaaryahan raaxo leh qaab dhismeedka Ferguson. Arintaan kuma aheyn Yurub halkaasoo uu inta badan ku fiicnaa qaab ciyaareedkii 4-5-1 ee Champions League, laakiin 4-4-2 England ayaa laga helay inuu mararka qaar soo shaac baxo.
Laba xilli ciyaareed ka dib, Ferguson wuxuu gooyay guuldaradiisii wuxuuna ka iibiyay Chelsea 15 milyan ginni.
4. Bebe (£ 7.4m)
Xaqiiqda ah inuu la soo saxiixday Manchester United iyadoo uusan Ferguson daawanin wuxuu ahaa mid laga naxo oo qalad uu halyeeyga Scot qirtay mar dambe.
Red Devils waxay rajeyneysay inay heystaan Ronaldo kale gacmahooda markii ay ka soo saxiixdeen buluug kooxda reer Portugal ee Vitoria de Guimaraes sanadkii 2010.
Bebe wuxuu ciyaaray 7 kulan xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay mana jiro seddexdii sano ee soo socota madaama uu inta badan amaah ku qaatay.
“Waan ogahay in Real Madrid ay dhaqdhaqaaqayeen sidoo kale Benfica,” ayuu yiri Ferguson markii uu saxiixay garabka. Waxay ahayd mid ka mid ah go’aannadaas in si dhakhso leh loo gaadho.
‘Mararka qaar waa inaad ku dhaqaaqdaa dareen mararka qaarna waa inaad aamintaa shaqaalahaaga sidoo kale. Tani waxay ii ahayd markii ugu horreysay, laakiin waxaan qiimeyneynaa waaxdayada indha-indheynta aad iyo aad ayaan u qiimeyneynaa oo indha-indheeyaasheena ku sugan Boortaqiiska waxay ku adkeysteen inaan u baahan nahay inaan wax qabanno.’
Waxaa laga yaabaa inuu jeclaan lahaa inuusan ku degdegin taas.
3. Massimo Taibi (£ 4.5m)
Massimo Taibi. Matt Le Tissier. Nutmeg.
Lixdaas erey waxay si dhakhso leh u xaqiijinayaan goolkii naxdinta lahaa ee ka yimid Talyaaniga, kaasoo ilaa maanta lagu xasuusto kuwa kubbadda cagta ku jira.
Taibi wuxuu ku biiray United sanadkii 1999-kii 4.5 milyan ginni, ka dib halyeeygii Peter Schmeichel uu ka tagay, laakiin wuxuu ku laabtay Italy sanadka soo socda isagoo kaliya ciyaaray afar kulan kooxda koowaad.
Taibi wuxuu si fiican ugu bilaabay United, isagoo ka soo qaaday ciyaar-ciyaareedkii uu soo bandhigay kulankii ay 3-2 kaga badiyeen Liverpool.
Laakiin ka dib waxaa soo muuqday nin caan ah oo ka hor yimid Southampton barbaro 3-3 ah. Taasi ma aheyn ciyaartiisii ugu dambeysay inkasta oo uu ciyaaray kulankii ay 5-0 kaga badiyeen Chelsea.
Laakiin iyada oo aan loo eegin shan gool, 51 jirka ayaa had iyo jeer lagu ogaan doonaa qaladkaas ka dhanka ah Saints.
2. Angel di Maria (£ 59.7m)
Kaliya dusha sare tani waxay ahayd musiibo. Muddo sanad ah, United ayaa qasaaro dhan 15.4 milyan ginni ah ka soo gaartay ciyaaryahan loo aqoonsaday inuu yahay laf dhabarta xilligii Ferguson.
Bishii Ogosto 2014, Angel di Maria ayaa ku soo biirtay kooxda markii ugu horeysay oo rikoor ah oo 59.7 milyan ginni ay ka heshay Real Madrid. Isagoo jira da’da 26, xiddiga reer Argentine ayaa door muhiim ah ka ciyaaray xilli ciyaareedkii ka hor iyadoo Real ay ku guuleysatay koobkeedii 10aad ee Yurub (La Decima).
Waxa uu ku bilaabay bilow adag mustaqbalkiisa Old Trafford, isagoo leh gool iyo caawin seddex ka mid ah afartii kulan ee ugu horeysay.
Laakiin ka dib markii lagu ciyaaray lix boos oo kala duwan, oo ay ku jiraan khadka dhexe iyo weeraryahan, wuxuu la kulmay dhibaatooyin garoonka dhexdiisa iyo banaanka ah inta lagu gudajiro sanadka cusub.
Di Maria iyo qoyskiisuba waxay ahaayeen dhibanayaal isku day dil ah bishii Janaayo 2015, taasoo keentay in dhammaantood ay dareemaan inay khalkhal ku qabaan Ingiriiska.
Laba bilood ka dib waxaa loo diray guuldaradii FA Cup ee ka soo gaartay Arsenal. Ma uusan bilaabin ciyaar kale ilaa ciyaartii ugu dambeysay ee ololaha ee Hull, kaliya inuu dhaawac muruqa ah ka dib 23 daqiiqo.
Ka dib wuxuu ku biiray Paris Saint-Germain, halkaas oo uu haatan joogo.
Shaki la’aan No 1. Ka dib dhammaan fanaaniintii la timid imaatinkiisa – xusuusnow fiidiyowga #WelcomeAlexis piano – waqtigiisii Old Trafford runti waa qoraal xusuus leh.
Ku soo biirista Arsenal, wax badan ayaa laga sameeyay Red Devils oo awood u leh inay ka fogeeyaan ‘deriska xun’ ee Manchester City.
Si kastaba ha noqotee, City ayaa qosolkii ugu dambeeyay madaama Sanchez uu masiibo ku ahaa Old Trafford.
Shan gool 45 kulan oo ay ciyaareen £ 560,000-usbuuciiba waxay aheyd ganacsi aad u xun oo ka yimid maamulka United. Waxa uu dhaliyay gool 555 daqiiqo kasta waxaana uu dhaawacmay guud ahaan 124 maalmood intii uu joogay waqooyiga.
Wuxuu ugu dambeyntii ka tagay bishii Ogosto 2020 isagoo si xor ah ugu biiray kooxda Inter Milan laakiin ma uusan ka helin United 9 milyan ginni. Way ka sii xumaan kartay inkasta oo uu xaq u lahaa inuu kasbado £ 50m oo dheeri ah labadii sano ee wali ku harsan heshiiska.
Ganacsi aad u xun ayaa ka socda Mourinho, kaasoo isku dayay inuu si xun uga dhex muuqdo bilowgiisa XI, iyo kuxigeenka fulinta Ed Woodward.
fashilmeen kooxda Manchester ogoow United Wax Xidig
Falanqeynta Kulanka Paris Saint-Germain Vs Bayern Munich UEFA…
DEG DEG: Deni oo shaaciyey in ciidamo lagu soo weeraray Xalane, shaki geliyey shirka
Sawirro: DF oo ciidamo hor leh ka dejisay Beled-Xaawo